विचित्र संसार | Maitri News - Part 2
अर्थ / वानिज्य​
धर्म​ / सांस्कृतिक
संसारको सबैभन्दा ठूलो मोती
ताजा पानीमा पाइने संसारको सबैभन्दा ठूलो मोती लिलाम बढाबढमा तीन लाख २० हजार युरोमा बिक्री भएको छ । स्लिपिङ लायन अर्थात् सुतिरहेको सिंह नाम दिइएको उक्त मोतीको लम्बाइ सात सेन्टिमिटर छ भने तौल १५३ ग्राम छ । कुनै बेला त्यो मोती रुसी महारानी क्याथरिन द गे्रटको स्वामित्वमा थियो । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित लिलाम घरका अनुसार २४०…
अन्तरिक्षमा लक्जरी होटल
अमेरिकाले अन्तरिक्षमा लक्जरी होटल बनाउँदै छ जसमा सम्पूर्ण सेवा सुविधा हुनेछन् । यो होटलको नाम औरारा स्टेसन राखिनेछ । उक्त होटलमा १२ दिने यात्रामा पुगेका अन्तरिक्ष यात्रामा संलग्न दुई चालकसँगै छ जना मानिसलाई आरामसँग बस्नसक्ने बनाइने छ । यो होटल सन् २०२२ सम्म तयार हुनेछ । १२ दिनसम्म बस्नका लागि अन्तरिक्ष पर्यटकले ९५ लाख डलर…
१०४ वर्षीय वैज्ञानिकद्वारा स्वेच्छिक देहत्याग
१०४ वर्षीय वैज्ञानिक डेभिड गुडलले स्विजरल्यान्डको क्लिनिकमा स्वेच्छिक देहत्याग गरेका छन् । उनले सो क्लिनिकमा आफ्नो देहत्यागका लागि चयन गरेका हुन् । वातावरण र वनस्पति क्षेत्रको अध्ययनमा सक्रिय उनी कुनै पनि रोगले ग्रसित थिएनन् । उनले आफ्नो जीवनको सबै गुणहरुको मूल्याङ्कन गरी देहत्यागको निर्णय गरेका हुन् । आफ्नो देहत्याग गर्न गुडल अस्ट्रेलियाबाट स्विजरल्यान्ड गएका थिए…
रुसले बनायो युरोपकै लामो पुल
रुसले युरोपकै लामो पुल बनाएको छ । यो पुलले क्रिमियालाई रुसको मूल भूमिसँग जोड्छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफैले ट्रक चलाएर पुलको उद्घाटन गरे । १९ किलोमिटर लामो यो पुलमा दुई भाग छ । एक भागमा गाडी र अर्को भागमा रेल गुड्ने बनाइएको छ । यहाँ पुल बनाउने सोच १९ औँ शताब्दीको अन्त्यमा बनाएको…
तिब्बतमा कृत्रिम वर्षा गराउने परियोजना
चीनले तिब्बती पठार क्षेत्रमा पर्याप्त कृत्रिम वर्षा गराउन ठूलो परियोजना निर्माण गर्दैछ । तिब्बती पठार एसियाको सबैभन्दा ठूलो ताजा पानीको भण्डार हो । यो परियोजना अन्तर्गत तिब्बती डाँडाहरुमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा इन्धन जलाउने च्याम्बरहरु निर्माण गरिन्छ । यो परियोजना सञ्चालनमा आउन थालेपछि तिब्बतमा वार्षिक १० अर्ब क्युविक मिटर वर्षा हुने बताइएको छ । हजारौ च्याम्बरहरु तिब्बती…
स्वाजिल्यान्डको नाम परिवर्तन
अफ्रिकी मुलुक स्वाजिल्यान्डका राजाले देशको नाम परिवर्तन गरेका छन् । अफ्रिकाको अन्तिम साम्राज्य स्वाजिल्यान्डका राजा मस्वाती तृतीयाले देशको नाम परिवर्तन गरी द किङडम अफ इस्वातिनी राख्ने घोषणा गरेका हुन् । देशको स्वतन्त्रताको ५० औँ वर्षगाँठमा आयोजित कार्यक्रममा राजाले देशको नाम परिवर्तन गरिएको आधिकारिक घोषणा गरेका हुन् । इस्वातिनीको अर्थ स्वाजिया भूमि हो । सन्…
मेकानिकको काम गर्ने राजा
अफ्रिकाका दुई राज्यका राजाले जर्मनीमा मेकानिकको काम गर्छन् । उनले स्काइपबाट आफ्नो राजकाज चलाउँछन् । ७० वर्षीय राजा सिफस बन्साह टोगा र घानाअन्तर्गत पर्ने दुई राज्यका बादशाह हुन् । उनले जर्मनीकमा कार मर्मतको काम गर्छन् । उनको जन्म घानामा भएको हो राजा नियुक्त हुनुअघि नै उनी सन् १९७० मा जर्मनी प्रवेश गरेका थिए ।…
भारतको केरलामा भोकमुक्त अभियानका लागि रेस्टुरेन्ट खुलेको छ । केरलाको अलप्पुझा जिल्लामा खोलिएको यस रेस्टुरेन्टमा इच्छा लागेको पेटभरी खान पाइन्छ तर पैसाचाहिँ आफूसक्दो तिरे पुग्छ । यदि पैसा छैन भने नतिरे पनि हुन्छ । यो रेस्टुरेन्टको नाम जनता भोजनालय राखिएको छ । यो रेस्टुरेन्ट राज्य सरकारको वित्तीय संस्थाको सीएसआर फन्डबाट सञ्चालित छ । वित्तमन्त्री थोमस…
पानी र जमिनमा अवतरण गर्ने विमान
चीनले जमिन र पानी दुवैमा अवतरण तथा उडान गर्नसक्ने संसारकै सबैभन्दा ठूलो विमान बनाएको छ । यो विमानको सफलतापूर्वक परीक्षण उडान गरिएको छ । लगभग बोइङ ७३७ को आकारको उक्त एजी ६०० विमानमा चारवटा इन्जिन छन् । यो विमानले ५० जना यात्रु बोक्न सक्ने र १२ घण्टासम्म उड्न सक्ने बताइएको छ । यो विमानलाई आगलागी…
१२५ रुपियाँमा घर किन्न पाइने सहर
इटाली । इटालीमा भने सरकारले एक युरो अर्थात् झण्डै एक सय २५ रुपैयाँमा घर बेचिरहेको छ । इटालीको भूमध्य सागरक्षेत्र नजिक सार्डिनियास्थित ओलोलार्इ भन्ने सहरमा एक यूरोमा घर पाइन्छ । विश्वका कुनै पनि देशका मानिसले यहाँ घर किन्न सक्दछन् । ओलोलाइमा पहिले जनसंख्या धेरै थियो । तर मानिसहरु यहाँबाट बसाइ सरेर जान थाले । पछिल्ला…
बेलायतमा कुकुरलाई जागिर
६० वटा पत्नी राख्ने पुरुष
MaitriNews.com is online media based in Kathmandu, Nepal, covering national and international news, events, sports, entertainment and others.
DOI Reg. No. : 923/075/76, OCR Reg No. : 104156, IRD VAT No. : 300092105